100W Anyanwụ na-akwado mbadamba ụgbọala ọkụ ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Na-adọba ụgbọala mpempe akwụkwọ nke Leta,Ike anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ,Anyanwụ na-akwado mbadamba ụgbọala ọkụ ọkụ
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Okpomọkụ na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala > 100W Anyanwụ na-akwado mbadamba ụgbọala ọkụ ọkụ
100W Anyanwụ na-akwado mbadamba ụgbọala ọkụ ọkụ
Ihe Nlereanya.: BB-LD-S-100W
Anyị ike adọba ụgbọala na otutu Solar Ìhè nke integrates ukwuu oru oma anyanwụ ogwe, Ikanam oriọna, na batrị n'ime otu ngwaahịa, tinyere a ọgụgụ isi mmadụ itinye n'ọkwa usoro, a Solar Power adọba ụgbọala na otutu Ìhè bụ ezigbo maka onye ọ bụla na-achọ a ala-na-ike, ogologo -agbapụ, elu-ìhè, na ngwọta ọkụ ọkụ na-ere. N'otu oge ahụ, mbara igwe na-ekpo ọkụ eletrik na ọkụ ọkụ dị mfe iji ụgbọ mmiri na ịwụnye.
Ebube na- ekpuchi ìhè anyanwụ na-apụta zuru oke maka ihe ọ bụla ngwa ngwa ọkụ. Nke a na-agụnye ịgbanye ogige, ebe obibi, ogige, ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ nye ìhè na okporo ụzọ ebe ọ dị mkpa. Batrị ahụ na-enye ike maka ọkụ ndị na-ere ọkụ na-acha ọkụ , na ogige ndị dị na mbara igwe na-enye ụgwọ maka batrị ahụ.
Na-adọba ụgbọala mpempe akwụkwọ nke Leta Ike anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ Anyanwụ na-akwado mbadamba ụgbọala ọkụ ọkụ Na-adọba ụgbọala mpempe ụgbọ mmiri Ụlọ ahịa ụgbọala mpempe akwụkwọ A na-adọba ụgbọala ọkpụkpọ N'èzí na-echekwa ụgbọala mpempe akwụkwọ Ebube na-echekwa ụgbọ mpempe akwụkwọ